Nanambara ary ny tale jeneralin’ny orinasa Atoa Randriamanana Henry, omaly fa efa manao ezaka goavana izy ireo ankehitriny. Ho an’ireo izay nangataka talohan’ny volana desambra taona 2017 dia nambarany fa hahazo kaontera mandrapahatonga ny faran’ny volana jolay ho avy izao ary ho vita mialoha ny volana desambra taona 2018 ny fametahana ny jirony. Raha ny fantatra dia manana kaontera 60.000 isa isika eto Madagasikara ankehitriny. 25.000 monja anefa ireo mpanjifa efa nisoratra anarana. Hanomboka amin’ny herinandro avy hatrany ny asa ka ekipa miisa 125 no indray haparitaka manerana ny Nosy hametaka kaontera fotsiny. Nomarihin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny JIRAMA fa tsy maintsy manao « devis » isaky ny « agence » ny mpanjifa teo aloha vao mahazo ary izay tonga aloha no omena fahafaham-po. Ankehitriny, efa alefa isaky ny fokontany ny fametahana kaontera mba hahatongavan’ny mazava ao an-tokantrano.